WASHINGTON (entendeni) - isitshalo ekhethekile wathandwa izinhliziyo balimi ngobuhle bazo. Lolu hlobo entendeni kuyinto hothouse esikhathini esiningi, kodwa eminyakeni yamuva abantu ngokuya uzama ukhule leso simangaliso ekhaya. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ukuba asebenze ngokuzikhandla, ngoba umuthi okwanele ezingezwakali. Palma, isithombe okuyinto ubona lapha, uncamela imisebe eliqhakazile ilanga, njengoba kuba okwazalelwa iMedithera. Mayelana nalesi nezinye izici sichaza kulesi sihloko.
Ngakho, ngaphambi kokuba ikhule lesi simangaliso ezingavamile, ukuhlangabezana naye. WASHINGTON - Palma, abeza kithi esuka eSouth America. Futhi, lesi sitshalo itholakala enyakatho Mexico. Naphezu kweqiniso lokuthi entendeni ejwayele sezulu nakwezifudumele, non-eliqinile le kungaba ukumelana lokushisa iconsi amadigri nambili ngaphansi kwezingaqhwa. It kungokwalabo umndeni arekovoy isihlahla uthanda ukuba kwi ezindaweni elikhanyayo kahle. Kubukeka omkhulu isitshalo enjalo kuvulandi noma kuvulandi ohlangothini lwaseningizimu, ikakhulukazi lapho sikanye kulo bayizinkulungwane omakhelwane ezifana umbomvana, Oeander futhi umfire. Ngaphezu kwalokho, e-Washington zingatshalwa ezindaweni zokukhiqiza kanye isihlahla kunalokho ngomoya ophansi ukubekezelela umoya ongcolile.
Uma sikhuluma ukubukeka simila, zingakhula emthini wesundu ukuba amathathu ubude. It kuncike hlobo yayo. futhi unalo leaf cuttings amakhulu angu-1.5. Isiqu sawo sikhulu futhi wambozwa zemicu namahlamvu omile liwile. Lapho sekuyisikhathi sokuba eziqhakaza, isihlahla kuveza imbali umoba imitha emithathu-eside lapho izimbali. Babukeka njengezihlahla panicles. Kodwa ngemva kwalesi sikhathi kuphela ngomhla ka imibala endaweni avele amajikijolo omnyama. Lena uju Intandokazi izinyoni.
Umuthi, okuyinto okukhulunywa lapha, has izinhlobo ezimbili. Yehluka nomunye, futhi ngenxa yalokho ukuthi ufunde incazelo kokubili izinhlobo:
Washingtonia nitenosnaya. Ibizwa nangokuthi fan entendeni California. Iqiniso ukuthi eCalifornia u yokuqala eyabonwa lokhu ubuhle, futhi kukhona ungabona lonke ihlathi nokutshala yalezi izitshalo kuwo. Ukuphakama esiphezulu izihlahla ongafinyelela amamitha amabili. Amaqabunga umbala grey-oluhlaza, futhi bakwazi ukubona eziningi white stripes (izindikimba). Kuyinto lesi sici futhi wanikeza entendeni igama lakhe. Izinkuni ukhetha ebusika obubanda at lokushisa 6 kuya ku-15, futhi ukukhanya kakhulu.
Washingtonia enamandla. Njengoba kanye ukubukeka lokuqala, it has a igama lesibili - Mexican entendeni anamandla. Leli gama wathola umuthi ngoba ikhula emngceleni eMexico nase-United States. Ngo ukukhula khulula entendeni ungakwazi yokwelula kuze kube amathathu ubude, futhi kubalulekile ukucabangela uma ukutshala isihlahla. Ngokungafani California ubuhle lesi sitshalo has a ukukhanya-oluhlaza amaqabunga elikhanyayo ngaphandle emapheshana, futhi petiole ngayinye leaf kukhona spike abukhali. Crohn has ngendlela ehloniphekile, uma kulinganiswa nokwenu nitenosnoy.
Abantu abaningi banesithakazelo umbuzo: indlela yokutshala entendeni Washington ekhaya? Sikhula kahle, kodwa zidinga izimo ezikhethekile.
Ukukhanyisa kufanele kube kukhanye kakhulu. Igumbi South, Veranda, kuvulandi - konke ekahle nesimangaliso ezishisayo. Kuze isitshalo incane, kubalulekile ukuba kokuqondisa okuqhubekayo nokunakekela, futhi kuphela njengomuntu omdala, angakhula esihlahleni endaweni nge esingaphansi ukukhanya okuphezulu.
Ukunisela isitshalo kufanele kube njalo, kodwa acabangele seasonality. Ehlobo, uma isimo sezulu esishisayo, isundu kufanele uyophuziswa kanye ngesonto. Ebusika, lapho kubanda ngaphandle, ukuthambisa kumele kungancipha, futhi ukwenza kanjalo kuphela lapho inhlabathi yome ngokuphelele. Phakathi nale nkathi, isihlahla uhlezi, kodwa basalokhu bengakakwazi lona ome. Lokhu kuyoholela ekuthuleni kokufa ngenakugwemeka wemithi yesundu.
Nomswakama egumbini lapho entendeni ezikhulayo, kumele kube kusuka 55 kuya kumaphesenti angu-75. Ukuze alondoloze lokhu nomswakama kumele kusetshenziswe sprayers. Ebusika, futhi luqhutshwa ukugeza amahlamvu ngendwangu emanzi.
Njengoba umuthi likhula ke kufanele akhanyiswe maqondana umthombo wokukhanya. Kuyadingeka ukuze kwakhiwe kahle wenziwe ngamahlamvu.
Palma, izithombe zazo ziboniswa lapha, lidinga ashona. Njenganoma iyiphi enye isitshalo, kubalulekile ukuba zalisa. Lokhu arcade kwenziwa entwasahlobo nasehlobo, njengoba kuhlala ebusika. Njalo wensimu self-ukuhlonipha uyazi ukuthi izitshalo abakwazi baphazamiseke esikhathini ukuphumula. Ngokuqondene nohlobo Umanyolo, ezitolo ezikhethekile ukudayisa izingoma ezakhelwe izihlahla ezifana entendeni, yucca, dracaena. Funda imiyalelo ngokucophelela futhi benze ngokuvumelana naso. ngenyanga kabili, kungaba Umanyolo kancane kancane Kunconywa.
Uma ukhule Washington (Palm), khona-ke ngokushesha noma kamuva uzodinga kabusha. Iqiniso lokuthi kuze isitshalo esisesincane (iminyaka efinyelela kwemithathu), kufanele repotted njalo ngonyaka. Khona-ke, njengoba zikhula (iminyaka emithathu kuya kwemihlanu), - kanye ngeminyaka emithathu. Futhi abadala ngaphezulu (phezu emihlanu edlule) - njalo ngemva kweminyaka emihlanu.
Ukuze kabusha isihlahla, udinga imbiza ne izinhlangothi okusezingeni eliphezulu, futhi noma kunjalo hhayi yehlisa esibuthakathaka. Inqubo transplanting kuyinto engcono kakhulu engingayenza ngasekuqaleni entwasahlobo isikhathi. Ngo enjalo okuyindawo enhle yokuqhubela inhlabathi ingxube isitshalo ezifanele Turf, amaqabunga, humus kanye isihlabathi isilinganiso 2: 2: 2: 1. Lesi seluleko kulabo abafuna ukwenza ingxube uqobo. Kukho konke sithengiswa ngomumo zesundu phansi.
Yiqiniso, abafundi bethu banesithakazelo umbuzo kanjani esandisa Washington. Ezikhula imbewu - kuyindlela lapho bonke zizalela entendeni. Ukuze le nqubo, udinga inhlabathi. Lokhu kulingana isilinganiso izingxenye ezifana Peat, isihlabathi futhi sphagnum. Ungase futhi ukuthatha umhlabathi umquba, kodwa kumele decontaminated phambi kwaso. Ngokwesibonelo, steamed ke e-microwave oven.
Imbewu abatshalwé ukujula isentimitha. Egumbini kudingeka silondoloze lokushisa mayelana amabili nanhlanu degrees. Buka eduze nokwesula inhlabathi amanzi. Nokho, uma kungenzeka ukuhlela Ukushisa kusuka ngezansi umthamo. Ngemva kwamasonto ambalwa uzophawula ihlume kuqala. Linda kuze kube yilapho zikhula futhi uthole namandla, udinga kabusha wabayisa ezitsheni ezihlukahlukene.
Inkinga enkulu nge ukutshala Lesi sihlahla kuthiwa sesineminyaka ekukhuleni kwayo. Cabanga lapho ungakwazi ukubeka isitshalo omdala uma ifinyelela ukuphakama esiphezulu. Kodwa akugcini lapho. Futhi, isihlahla bangase bahlupheke ukuhlaselwa inkathazo. Kuyadingeka ukuba sihlale njalo siqaphele isimo somuthi zisuse izinguquko. Scale izinambuzane, izibungu futhi mealy bug - izivakashi njalo kakhulu entendeni.
Ngaphezu kwalokho, uma bazithela kahle noma ukubekezelela kushintsha izinga lokushisa, amaqabunga isitshalo angase mnyama, zinyakaze zivela amabala. Into esemqoka kuleli cala - ukubona inkinga ngendlela esifike ngesikhathi, ukuhlola isimo ngokhuni bese uyalikhipha. amahlamvu elinegciwane ke isuswe.
Amaqiniso ethakazelisayo simila
WASHINGTON (entendeni) isetshenziswa emhlabeni hhayi kuphela njengoba isici zokuhlobisa. Ezindaweni lapho esihlahleni eyafika ilandelana ngayo kithi, it is asetshenziswa njengokudla. Imbewu wamasundu ezisetshenziswa ukukhiqizwa ufulawa, isibonelo, petioles amaqabunga zidliwa njengoba uluhlaza noma uphekwe. Ngaphezu kwalokho, kusukela impahla fibrous eyenziwe entendeni leaf obhasikidi.
Jaundice conjugation: ukuxilongwa, izimbangela, ukwelashwa